Ugaaskii 19aad ee Beesha Ciise oo Cimaamad Lagu Saaray Saylac – Rasaasa News
Ugaaskii 19aad ee Beesha Ciise oo Cimaamad Lagu Saaray Saylac
Mar 3, 2010 ciise, Ugaas
“Tawfiiq Ciise madoobiyo Talyankii Faranjaa leh, Tuhuna shuunka Axmaariyo nin la soo tashadaa leh, Nin Maroodi taxaabey oo Abees tunka saaray inuu aayar taxaasho taana weysan ahaanin.” Guraase Xaaji Cali
UGaaska kaliya ee ay leeyahay beesha ciisuhu ayaa shalay lagu caleemo saaray degmada saylac ee gabalka Awdal. Ugaaska ayey xulashadiisuu qaadatay muddo 15 sano ah, waxaana ugu dambayntii laga helay magaalada Dire Dhabo. Ugaaska ayaa la yidhaahdaa Mustafe Maxamed Ibraahim Ugaas Wacays oo asal ahaan ka soo jeeda degmada Saylac.
Si loo caleemo saaro Ugaasku waxaa uu socdaal dheer ku soo maray dhamaan degmooyinka ay beesha ciisuhu degto, socdaalkaas oo ku dhamaaday degmada Saylac oo ah meesha ugu dambaysa ee lagu caleemo saaro Ugaasyada Ciisaha.
Cajiib, Beesh Ciisuhu waxay ka mid tahay beelaha waaweyn ee somalida waana beesha kaliya ee leh hal Ugaas, arintaas oo ay ugu wacan tahay dhaqanka towfiiqda ee ay beeshu taariikhda u leedahay.
Waxay beeshu leedahay dhaqan ka wanaagsan Dimoqraatiyada ay reer galbeedku ku faanaan oo ah in xukunka looga dambeeyo ruuxa ay dadku doortaan.
Beesha Ciisaha ayaa ka kooban lix lafood, oo ay dhahaan saddexda lafood ee ciise iyo saddexda soo raac, oo micnaheedu yahay saddex asal ciise ah iyo saddex dhaqanku ciise ka dhigay. Somalida ayaa dhaqan u leh isu dhaarashada in beelbeel la walaalowdo dhiig iyo dhalashabana ay ku midoobaan.
Beelaha Ciisaha ayaa marka wax isku qabsadaan ee ay midi dareento in arinta la isku hayo ayna dadka garta goynayaa cadaalad samaynaynin, isku caraabiyaan “ciise waa wada ciise midna caarad ma dheera” oo macaneedu yahay walaalo ayeynunahay cadaalad darana iskuma samayn karo.
Ugaaska Ciise dhaxaltooyo ma aha, laakiin waxaa uu had iyo goorba ka yimaadaa ha beel oo la yidhaahdo Wardiiq oo ka mid ah saddexda soo raac, waana beesha ay karaamada ku duhmaan Ciisuhu. Ugaas waxaa xula gudi ka kooban lafaha ay ka kooban tahay beesha ciisuhu, waxaanu uu shardiga kobaad yahay in wiilka la xulanayo lagu tumo karaamo, oo ay qoyskiisu sheegaan tan iyo maalinkii uu dhashay waxyaabaha ay ka arkeen.
Wiilka kolka uu dhasho reerkooda ula dhasha in uu wax u kordho, aadaab badan, caqli badan, ixtiraam badan, itaal iyo qurux leh ayey xushaan. Intaa ka dibna waxay tijaabiyaan karaamadiisa iyo sida ay hoodadiisu tahay.
Ugaasku waa madaxweyne oo kale, waxaana hawsha wada gudi ugaaska la shaqeeya oo ka kooban beelaha ciisaha oo dhan, wixii ay go,aamiyaan ayuu Ugaasku ku dhawaaqaa oo la yidhaahdaa Ugaasku sidaas ayuu yidhi.
Waxaan aaminay kolkaan baadhay dhaqmaadka beesha ciise, in uu Ciise haysto dhaqankii beeleed ee dhabta ahaa ee ay Somalidu lahaan jirtay.
Beelaha Somaliyeedna, waxay dilaan Ugaasyadood iyo Geesiyada Hogaaminta ee beelahooda, kolka bal is barbar dhig farqiga u dhaxayn karaya.
Qayb 2aad Qisadii Guur ee Ardo Cilmi
Oo heleele heleelee, Jacaylkaygii Rumaadoow, Yaa Godeey Kula Joogoo/Canab Indha-deeq iyo Cali Dhaanto
Waxaa ku Soo Biiray Maansada “Gudgude” Xildhibaan Saado Cali Warsame
Jul 2, 2014 Rasaas
“Gantaal” waa gabay cusub oo uu tiriyey Cabdirashiid Jaamac Boos, oo jawaab u ah gabayga “Gudgude” oo uu tiriyey Axmed Sheekh Cali Heelaale.
Dhaqanka Ganacsi Galmoodka Atoobiya oo Galay Jijiga
Jun 21, 2014 Rasaas